Etu ị ga - esi mee ihe kachasị na desktọpụ gị na Mbugharị Mbugharị | Martech Zone
Na ngwa ngwa ịmakụ mobile, ọ dị mfe maka azụmaahịa ileghara saịtị desktọọpụ ha anya, mana ọtụtụ mgbanwe ka na-eme site na usoro a, yabụ ọ bụ ihe amamihe dị na ya ileghara saịtị desktọọpụ gị anya. Ihe kachasị mma bụ ịnweta saịtị maka ọtụtụ nyiwe; mgbe nke ahụ gasị, ọ bụ ihe ị ga - ekpebi ma ị ga - achọ saịtị mkpanaka na - enweghị atụ, saịtị na - anabata ihe nke na - edepụta desktọọpụ desktọọpụ na ekwentị, ngwa na - arụ ọrụ, ma ọ bụ ngwakọ ngwakọ.
Ọnụ ọgụgụ banyere iji ekwentị aga n'ihu na Skyrocket
71% nke ngụkọta nkeji dijitalụ ejiri na ntanetị na United States si na ekwentị. Nke ahụ gbagoro na 75% na Mexico na onye kpụrụ 91% na Indonesia. Trazọ UK dị ntakịrị na 61%.
Na United States, ndị toro eto na-etinye nkezi nke 87 awa n'ọnwa na ntanetị na ama atụ na desktọọpụ.
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 70% nke ndị okenye America jiri desktọọpụ na mobile nyiwe, na desktọọpụ-naanị na ọnụ ọgụgụ ndị ọrụ naanị na-efegharị gburugburu 15% akara.
Ọ dị mkpa iburu n'uche site na ọnụọgụ ndị a na ọ bụghị ihe niile na-agbanwe site na desktọọpụ gaa na mkpanaka… ọtụtụ omume ndị ọrụ anyị na-agbanwe na desktọọpụ NA mobile. Dịka ọmụmaatụ, m na-azụkarị ahịa maka ntanetị n'ịntanetị site na ekwentị mkpanaka m mgbe m na-ele telivishọn. Mana anaghị m azụta ihe ruo mgbe m nwere ike ịlele ngwaahịa ahụ na desktọọpụ m ebe m nwere ike ịhụ ọtụtụ nkọwa zuru ezu na foto ngwaahịa, wdg.
Ihe ozo bu eziokwu dika ya. Ọtụtụ oge ndị mmadụ na-arụ ọrụ ga-achọpụta edemede ma ọ bụ ngwaahịa na ntanetị, wee chekwaa ha na mkpanaka ha iji lelee ma emechaa. Ọ bụ ezie na ekwentị na-aghọ go-to, ọ bụghị mgbe niile ndabara.
Dika nkwanye aka, na nso nkwukọrịta ubi, na geolocation na-aghọ ihe eji eme ọgụgụ isi na ngwa mkpanaka, achọpụtara m onwe m na-eji ngwa ngwa karia. Otu ihe atụ bụ nnukwu ụlọ ahịa obodo, Kroger. Ngwa ngwa ngwa ha na-eme ka m mata ozugbo m na-aga n'ọnụ ụzọ obodo m Kroger ọ na-echetara m ka m mepee ngwa ahụ ma chọọ ọpụrụiche. Ọbụghị naanị nke ahụ, ngwakọ ngwaahịa ha na-agwakwa m nke wara wara nke m nwere ike ịchọta ngwaahịa ndị ahụ. Ebumnuche ahụ na oge a na-ewu ya na ngwa, mana ọ bụghị eziokwu mgbe niile site na ihe nchọgharị weebụ.
Ihe omuma a site na NSỌ, Ndị ọrụ nkwado ọrụ jikwaa IT, na-atụle nhọrọ dị iche iche maka ịtụle mgbe ị na-akwagharị na ebe nrụọrụ weebụ desktọọpụ gị ma na-achọpụta ya maka mkpanaka. Ọ na-ekwukwa okwu mgbe azụmahịa nwere ike ịchọ ịdabere na mkpanaka yana ebe nrụọrụ weebụ dịpụrụ adịpụ zuru oke, weebụsaịtị nke na-anabata ma ọ bụ ekwentị ma ọ bụ desktọọpụ, ngwa mkpanaka, ma ọ bụ ụfọdụ ngwakọ ngwakọ nke ọ bụla. GoDaddy, dịka ọmụmaatụ, nwere ngwa mkpanaka dị ukwuu akpọrọ Investors nke na-eme ka ọ dị mfe maka ndị nwere mmasị na ngalaba ịchọta ma zụta ha… ọ bụ ngwaahịa dị niche mana ọ dị mfe karịa weebụsaịtị iji.
Tags: atụmatụ imeweMbugharị mbugharị desktọọpụndị ọzọngwakọ mobile ngwakọinfographicmobile ngwangwa mkpanaakamobile imewe Atụmatụọnụ ọgụgụ ekwentịmobile na desktọọpụ Mbugharịwebụsaịtị mkpanakaweebụsaịtị zara ajụjụ